Sidee loo sameeyaa kaydinta gacanta ee XFCE ee Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Maqaal hore Waxaan kala hadlayey iyaga qaabka ku saabsan dib u habeynta qaabkeena of our Deegaanka desktopka LXDEHagaag, hadda waa markooda kuwa isticmaala XFCE.
In kastoo waxaa jira qalab otomaatig ka dhigi kara hawsha, qaar badan oo ka mid ah hadaanay badidoodu badiyaa qabanin gurmad buuxa oo ah had iyo jeer maahan waxa ugu fiican, markaan kaliya dooneyno inaan kaydino waxyaabaha qaarkood.
Waxa ku wanaagsan barnaamijyadan ayaa ah in qaar badani kuu oggolaadaan inaad doorato wixii aad kaydsan lahayd, in kasta oo nasiib-darro ay wax had iyo jeer maqan yihiin
In kastoo Deegaanka desktop-ka ee XFCE wuxuu adeegsadaa qalab fara badan iyo teknolojiyada dejimaha Dconf si dhakhso leh looma dhoofin karo xal fudud oo gurmad ah.
Kuwa doonaya inay abuuraan keyd deegaankan desktop waxay u baahan doonaan inay abuuraan mid iyagoo isticmaalaya nidaamka faylka.
Haddii aad raadineysid inaad sameysid 'XFCE bakcup', waa inaad cadaadin oo aad keydisaa feylasha laga bilaabo miiska muhiimka ah galka ~ /.config.
1 Abuuritaanka keydka XFCE
2 Mawduucyada iyo astaamaha kaabta
3 Sidee loo soo celiyaa bakteeriyada 'XFCE bakcup'?
Abuuritaanka keydka XFCE
Waa inay ka warqabaan in xulashada inay dib u dhigto wax kasta oo ku jira galka galka waxay qaadan doontaa meel badan oo ka badan inta si fudud loo kaydin karo faylasha.
Tan awgeed waxaan u fureynaa terminal gudahana waxaan ku fulin doonnaa amarka soo socda:
Tani muddo ayey qaadan kartaa, iyadoo kuxiran xaddiga macluumaadka galkaagu ka kooban yahay.
Markay hawshu dhammaato waxay hore u lahaan doonaan feyl daamur ah oo ay kaydin karaan, dhaqaajin karaan ama wax kastoo ay niyadda ku hayaan inay ku sameeyaan.
Beddel ahaan waxaan haysannaa suurtogalnimada abuuritaanka nuqul nuqul ah faylasha XFCE. Si aan u bilawno hawsha terminaalka waxaan ku fulinaynaa amarradan soo socda.
para kiiska kuwa isticmaala Xubuntu waxay u baahan doonaan inay qabtaan ficilada qaarkood kuwaas oo dheeraad ah kuwaas oo ah inay nuqul ka sameystaan ​​galka Xubuntu galka galka qaabeynta.
Ya haysashada wax kasta oo meesheeda ah waxaan si fudud u fulin doonnaa amarka soo socda si loo abuuro feylkeena isku dhafan oo leh dhammaan xogta:
Sidee ayey iyaguna u ogaadaann qayb ka mid ah dejinta iyo muuqaalka muuqaalka ee jawiga desktop waa mawduucyada iyo astaamaha, markaa waxaan u sameyn karnaa keydkan habka soo socda.
Waa inay ogaadaan inay jiraan laba wadiiqo oo suurtagal ah oo ay ku keydsan yihiin, halkaasoo ugu caansan ay tahay midka ku dhexjira galka "/ usr" ee salka u ah nidaamka faylka. Meel kale oo ay inta badan leedahay waa gudaha galka shaqsiyeed ee "/ guriga".
/ usr / share / icons y / usr / share / mawduucyada ama ~ / .icons y ~ / .themes.
Hadda oo dhammaan mawduucyada gaarka ah iyo astaamaha ay ku jiraan faylasha TarGZ, kaydinta ayaa la dhammaystiray waxaadna ku keydin kartaa faylasha isku soo uruuray daruurta, USB-ga dariiqa kale ee adag ama wax kasta oo aad maskaxda ku hayso inaad iyaga ku sameyso.
Marka kaydinta la dhammeeyo, waxaad sameyn kartaa nidaamka inuu isbeddelo, u gudbi qaabeynta kombiyuutar kale, la wadaag ama wixii aad jeceshahay inaad ku sameyso.
Sidee loo soo celiyaa bakteeriyada 'XFCE bakcup'?
In si fudud xogta looga soo celiyo terminal-ka waxaan fulineynaa amarrada soo socda:
O kiiska kaliya soo celinta XFCE:
Y ugu dambayntii mawduucyada iyo astaamaha leh:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo sameeyaa kaydinta gacanta ee XFCE ee Linux?
aad u fog, waxaan isticmaalayaa MX Linux oo leh aalad u gaar ah oo lagu abuuro keyd ISO caadadiisu tahay. Adeegso desktop-ka XFCE. Meelaha kale ee loo yaqaan 'Ubuntu distros', waxaad isticmaali kartaa Pinguy Builder, waxay sidoo kale si fiican u shaqeysaa si loo abuuro sawirro ISO ah oo keyd ah. Waxaan u adeegsanaayey ilaa ugu dambeysay Xubuntu 18.04, laakiin waxaan aaday MX Linux 17.1, oo cajiib ah, waxay leedahay qalab kale oo badan oo loogu talagalay isticmaalaha sidoo kale waxay ku saleysan tahay DEBIAN Stable.
Run, sidoo kale waxaan u adeegsadaa mx16 BY SERVER rakibay ... laakiin waxaan la wadaagayaa sida xasilloonida iyo iftiinka iyo u adkeynta qalabka loo yaqaan 'distro' loo dhisay, laakiin waxay mudan tahay layliga, in la ogaado qaabdhismeedka XFCE. waad ku mahadsan tahay maqaalkan.
Jawaab Fernando Rodriguez
Mashruuca SC Controller wuxuu leeyahay war iyo nooc cusub